ANDRY RAJOELINA - JOURNALISTES VIDEOS IAVOLOHA 07 01 2022 - jeannotramambazafy.overblog.com
Ny Zoma 07 Janoary 2022 dia nanasa ireo tompona gazety ("Patrons de presse") sy ny Tale sy Tonian'ny gazety ("Directeurs de publication" et "Rédacteurs en chef") misy eto Madagasikara, ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina sy Ramatoa vadiny, Mialy Razakandisa Rajoelina.
Araka ny hitanareo io ambony io dia nanahazo fanasana amin'ny anarako aho. Saingy tsy dia salama ny tenako talohan'io lanonana io ka dia tsy afaka nanatrika izany teny amin'ny Lapam-panjakanan'Iavoloha.
Na izany aza, manana ekipa ny gazety amin'ny Internet, madagate.org koa dia ireto ny vidéos mirakitra ny fanontaniana rehetra napetraky ny mpanao gazety ary, indrindra indrindra, ny valiny avy amin'ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina. Tafiditra ao anatin'ny rakitra ho an'ny Tantaran'i Madagasikara ireo vidéos ireo.
Jeannot RAMAMBAZAFY sy zANDRY